10 Calaamadaha laga yaabo inuu Qofka u baahdo Daryeelbixiye Context link | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
La Soo Geliyay: Maarso04, 2022 Context link
Waxaa jira siyaabo badan oo qof u noqdo daryeelbixiye. Context link Dadka qaar ee leh waalid da' ah ama qof ay jecel yihiin, waxa laga yaabaa inay isla markiiba ku dhacdo jiro lama filaan ah ama xaalad caafimaad oo degdeg ah. Context link Laakiin kuwa kale, isbeddelku wuxuu u dhici karaa si tartiib tartiib ah. Context link Taasi waxay adkeyn kartaa in la ogaado goorta la soo galayo. Context link
U fiirso calaamadahan uu qof uga baahan karo caawimaad dheeraad ah daryeel bixiyaha. Context link
1. Joojinta hawlaha joogtada ah Context link
Ka tanaasulida hawlahooda bulshada ee ay jecel yihiin iyo inay doortaan inay guriga joogaan beddelkeeda waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa inuu qof ka baxayo ama isgo'doominaayo. Context link Dhab ahaantii waa wax la ilaaliyo. Context link
2. Muuqaal aan la dhaqin ama aan hagaagsanayn Context link
Tani waxay calaamad u noqon kartaa dhibaato maskaxeed sida xusuusta oo lunto. Context link Ama waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa in qof ay ku adag tahay hawl maalmeedka sida qubayska iyo labiska. Context link
3. Daawooyinka oo aan la qaadanin Context link
Joojinta qaadashada daawooyinka waxay noqon kartaa calan weyn oo cas. Context link Waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa dibaato xusuus. Context link Waxay kaloo khatar ku tahay fayoobida qofka Context link
4. Hilmaanka Context link
Qof kastaa wuu meel qaldan digaa furayaasha ama wuxu iloobaa inuu waxyaabo sameeyo marmarka qaar. Context link Balse marka hilmaanku uu dhaco marar badan, waxay noqon kartaa calaamad dhibaato weyn ah oo xagga xusuusta ah ama fikirka ah. Context link
5. Guri qasan Context link
Awood la'aanta in aad la socoto hawlaha caadiga ah ee guriga waxa laga yaabaa inay calaamad u tahay isbeddelka caafimaadka jidhka ama maskaxda. Context link
6. Nabar aan la garanayn Context link
Nabarrada dahsoon waxay noqon karaan calaamad muujinaysa in qof da'da ah uu dhacay. Context link
Qorshayaasha caafimaadka laba-geesoodka ah waxay fududeynayaan isku dubaridka daryeelka loogu talagalay dadka u baahan inay maareeyaan dhakhaatiir, takhasuslayaal iyo adeegyo daryeel oo badan. Context link
7. Aan xiranayn dharka saxda ah Context link
Aan labbisanin cimilada qabow ama qoyan waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa in qof uusan is daryeeli karin. Context link Luminta dharka waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa miisaanka oo yaraada, laga yaabo inay sabab u tahay xaalad caafimaad oo aan la daweyn ama aan si sax ah oo aan loo cunin. Context link
8. Waddida oo adkaato Context link
Marka qof ay dhibaato ka haysato baabuur wadida, waxay khatar gelinayaan naftooda iyo kuwa kaleba. Context link Sababtu waxay noqon kartaa dhibaato jireed sida xanuunka kala-goysyada ama aragga oo luma. Context link Ama waxay noqon kartaa arrin maskaxeed sida xusuusta oo lunta. Context link
9. Raxan biilal ah oo aan la bixin Context link
Awood la'aanta inaad la socoto boostada ama aad bixiso biilasha waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa in qofka ay ku adag tahay fikirka. Context link
10. Isticmaalida alaabta guriga si aad u wareegto Context link
Ku dhegitaanka alaabta guriga si ay gacan uga geysato socodka guriga waxay noqon kartaa calaamad muujinayso dhibaatada socodka. Context link Tilmaamaha kale waxaa ka mid ah ka fogaanshaha socoshada aan loo baahnayn ama inay ku adkaato soo gelista iyo ka bixista baabuurka. Context link
Caawinaad dheeraad ah oo loogu talagalay dadka haysta Medicaid iyo Medicare Context link
UnitedHealthcare waxay bixisaa qorshaha caafimaadka laba-u-qalmitaanka, ama Qorshayaasha Baahida Gaarka ah ee Labada ah, si loogu caawiyo dadka u qalma Medicaid iyo Medicare labadaba. Context link Dadka u-qalma labada caymis ee Medicaid iyo Medicare inta badan waxay qabaan baahiyo caafimaad oo daran, oo socda. Qorsheyaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah ee loo qalmi karo ayaa loogu talagalay inay u sahlaan nolosha xubnaha. Wayna sahli karaan nolosha daryeelayaasha sidoo kale. Qorshayaashaan waxay fududeynayaan isudubaridka daryeelka ee loogu talagalay dadka u baahan inay maareeyaan dhakhaatiir, takhasuslayaal iyo adeegyo daryeel oo badan.